ZTE dia handefa ny telefaona 5G voalohany amin'ny faran'ny taona 2019 | Androidsis
Ny telefaona 5G voalohany an'ny ZTE hanomboka amin'ny faran'ny taona 2019
Eder Ferreno | | About us, ZTE
ZTE dia iray amin'ireo orinasa tafiditra indrindra amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny 5G. Na dia tsy mandeha tsara aza izany, satria noraran'i Aostralia ny orinasa tsy hiasa amin'ity fampandrosoana ity ao amin'ny firenena, ary afaka miditra tsy ho ela i Japon. Ny orinasa dia iray amin'ireo voalohany nanambara ny fandefasana smartphone izay mifanaraka amin'ny 5G.
Ny tetikasan'i ZTE dia ny handefa an'ity telefaona ity eny an-tsena amin'ny tapany voalohan'ny taona 2019. Mety manodidina ny lohataona, fa novaina ireo drafitra ireo. Ary ny fanombohana ity fitaovana ity dia nahemotra hatramin'ny faran'ny taona manaraka.
Hatreto dia mbola tsy nisy fanazavana nomena momba io fahatarana io amin'ny fandefasana telefaona. Nanambara tsotra izao ny orinasa ho tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny taona 2019 ny telefaona. Ary toa mikendry famotsorana izy ireo manomboka amin'ny fararano 2019. Ka tara antsasaky ny taona izany.
Azo atao izany amin'ny daty ZTE Tsy izaho irery no hanana telefaona eny an-tsena izay manohana ny 5G. Satria maro ny orinasa miasa amin'ny fampandrosoana ity teknolojia ity. Ary misy orinasa toa an'i Samsung izay manana fifanarahana fiaraha-miasa amin'i Qualcomm.
Ny media sasany dia maminavina izany ZTE dia nisedra olana amin'ny fampandrosoana 5G ary ny fampiharana azy amin'ny telefaona. Na dia mbola tsy namaly ny tsaho rehetra aza ny orinasa. Ka ny antony mahatonga ny fanemorana ity fitaovana ity dia tena tsy fantatra. Saingy matetika tsy famantarana tsara izany.
Tsy maintsy miandry ny ZTE isika vao hilaza amintsika bebe kokoa ny antony mahatonga azy ireo hampihemotra ity finday ity. Ho toy izany koa isika mahatsiaro ny mety ho fandraràn'ny governemanta Japon hiasan'ny orinasa amin'ny fampiroboroboana ny 5G ao amin'ny fireneny. Hisy fihemorana vaovao ho an'ny mpamokatra sinoa araka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny telefaona 5G voalohany an'ny ZTE hanomboka amin'ny faran'ny taona 2019
Lenovo handefa telefaona fakantsary azo esorina